Sidee ku heshay Al-Shabaab Gaadiidka Gaashaaman? | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab waxay hubka ku dagaal gasho ka heshaa intooda badan saldhigyada ay weerarto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shabakadda Al-Kataa'ib ee dacaayadaha u faafisa Kooxda Al-Shabaab ayaa lasoo dhigay Sawiradda gaadiid gaashaaman oo ah kuwii ugu dambeeyay ee Turkiga uu siiyay Ciidanka Gorgor.
Gaadiidkan oo horey Ciidanka dowladda Soomaaliya u heysan ayaa dhawaan dalka la keenay, waxaana loogu deeqay Gorgor oo Turkiga tababar siiyay, kuwaasoo la geeyay sanadkii tagey degaanno ku yaalla Shabeellaha Hoose.
Al-Kataa'ib waxay soo bandhigtay Sawiradda Gaadiid aan ka muuqan wax dhaawac ah oo u muuqdan inaan dagaal lagu qabsan ama weerar lagu qaaday saldhig military oo Ciidanka dowladda leeyihiin.
Kooxda Al-Shabaab labo qaab ayay hubka ku heshaa, in ay kasoo bililiqeysato saldhigyada Ciidanka ee ay weerarka ku qaado iyo mid si suuq madow looga iibiyo, iyadoo ay jiraan Saraakiil militeri oo xiriir hoose la leh Kooxda.
Weerarkii ugu dambeeyay ee Bariire iyo Awdheegle waxay Al-Shabaab ku qabsatay hub aad u badan iyo gaadiid dagaal oo Ciidanka Gorgor lahaayeen, wuxuuna weerarkan ahaa midkii ugu dhimashada badnaa sanadkan oo ka dhaca dalka.
Meesha sida weyn ugu jabtay Al-Shabaab waa Awdheegle oo in ka badan 100 looga dilay, iyadoo dhankeeda Bariire ku laysay askar badan oo dowladda katirsan, waxayna dowladda hadda labada dhig geysay Ciidamo dheeraad ah.